Nei Uchishandisa Zvemukati Zvemukati muSocial Media?
Chitatu, September 11, 2013 Chitatu, September 11, 2013 Douglas Karr
B2B Kushambadzira Infographics nguva pfupi yadarika yakagadzira infographic kuti inyatso tarisa kune mamwe manhamba anonakidza kubva kuna Heidi Cohen mukushandisa zvirimo zvinoonekwa mukushambadzira midhiya yenhau. Iwo maverengero akapihwa ari kumanikidza kuti chero hurongwa hwemagariro kambani yako irimo parinofanira kuve rinotongwa nezviratidzo. Vaparidzi vanoshandisa infographics sechombo chavo chekushambadzira vanogona kuwedzera traffic yavo ne12%. Mifananidzo inofarirwa zvakapetwa zvakapetwa semavara ezvinyorwa paFacebook. 94% zvimwe zvakakwana
Isu takagovana zvimwe zvemukati zvinokurudzira masisitimu senge Outbrain Ko kana zvirimo zvisiri zvemavara mune zvakasikwa, hazvo, uye zviri kutaridzika - semakoponi, grafiki yeruzivo, mifananidzo yekutengesa, mafoni-kune-chiito kana mifananidzo? Reachli inoratidzira yekushambadzira network. Reachli ane vanopfuura 70,000 vashambadzi vanowana anopfuura mamirioni 3.5 kutariswa pamwedzi! Reachli ane yekodhi yekodhi-uye-mechi tekinoroji inoshandisa kiyi, mamiriro, uye mapikicha anoenderana algorithms yekubatanidza chero aripo mufananidzo pawebhu ne